Aaska M/weyne C/llaahi Yuusuf oo loo asteeyey Axadda soo socota iyo abaabullo loogu diyaargaroobayo oo socda. – Radio Daljir
Abu-Dubai, Mar 23 – Alle ha u naxariistee M/weynihii hore ee dawladda federaalka C/llaahi Yuusuf Axmed ayaa si rasmi loo iclaamiyey xilligiisa aasitaan in ay noqon doonto 25-ka bishaan Maarso, taasoo ku beegan maalinta Axadda ah ee innagu soo aaddan sidaasina waxaa Radio Daljir u xaqiijiyey saraakiil ka tirsan safaarradda Soomaalida ee Immaaraadka.
Diyaargaraw ballaaran oo lagu maamuusayo aaska m/weynaha ayaa ka socda meelo kale duwan oo dalka, waxaana abaabulka aas ee ugu xooggan uu ka socda Puntland iyo Muqdisho.
Dawladda federaalka ayaa si rasmi ah u shaacisay samaynta aas-qarameed loo sameeyo alle ha u naxariistee m/weyne Yuusuf, waxaana madaxweyne Shariif oo magacaabay guddi gaar ah oo arrimahaasi ebyi doona, isagoo dhinaca kalena shaaciyey todobo maalmood ee baroor-diiq ah.
Dhinaca Puntland, waxaa socda diyaargaraw kaas la mid ah, waxaana madaxweyne Faroole ku dhawaaqay saddex maalmood oo calanka hoos loo dhigi doono, iyo aas-qaran oo madaxweynaha loo sameeyo, waxaana dhinaca kalena uu sheegay Puntland in lagu aasi doono.
Alle ha raxmee, M/weyne Yuusuf waxaa uu saaka ku geeriyooday isbitaal ciidamada millatarigu leeyihiin oo lagu magacaabo Shiikh Saa’id, kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu la jiifay xanuun soo wajahay, kaddibna sababay in uu u geeriyooda.
Dhimashada C/llaahi Yuusuf, ayaa timid isagoo muddo dhawr sanno dalka banaanka ka joogay, waxaana intii ka dambaysay is-casilaaddiisii sannaddii 2008-dii intii badnayd uu ku sugna waddanka Yemen oo ay Soomaaliya saaxiibtinino dhaw laahaayeen, inkastoo uu ka diga-rogtay markii ay xasaraduhu ka dillaaceen, waxaana uu ayaamihii dambe ku sugnaa Immaaraadka Carabta ee uu saaka ku geeriyooday.
C/llaahi Yuusuf intii uu ka fariistay arrimaha siyaasadda Soomaalida uu qoray buug weyn oo uu ugu magac daray Halgan iyo Hagardaamo, kaasoo uu uga xog-warramay taariikhda iyo halgankii dheeraa ee uu u soo maray baadi-goobka hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya, kaasoo ugu dambayntiina uu ku guulaystay sannaddii 2004-tii markaasoo loo doortay madaxweynaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya shirkii Inbagaati.
Marxuub Yuusuf, markii ugu dambaysay ee uu maslax uga hadlo masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo himilooyinkii maankiisa ka guuxayey waxaana ay ahayd 29-kii December ee sannadkii 2008-dii xilligaasi oo uu baarlamaankii wakhtaasi jiray oo dhammaa 275 mudane uu ka horjeediyey khudbaddii uu xilka m/weynenimada iskaga casilay, taasoo uu ku soo gunnaanaday hanqal-taaggiisii siyaasadeed, kaddib markii maaro loo waayey is-maandhaaf ka dhex aloosmay iyo R/wasaarihiisii xilligaasi Nuur Xasan Xuseen ‘Nuur Cadde’.
Wixii ka dambeeyey is-casilaaddaasi alle ha u naxariistee m/weyne Yuusuf kuma daqaqamin danaha siyaasadeed ee Soomaaliya inkastoo waraysiyo war-baahintu dhawr jeer la yeelatay uu wuxuun odaras ah ka bixiyey soo aaddanaha wakhtiya iyo wacyiga la filan karo.
Madax kala duwan iyo mas’uuliyiin siyaasadeed oo ay muddo soo wada shaqeeyeen ayaa xog-warran taariikheed oo ay ka bixiyeen ku ammaannay arrimo badan oo iskugu dhafan, waddaniyad, daacadnimo, dad la dhaqan iyo dadaallo la xiriira hirgalinta hannaan dawladnimo oo Soomaaliya ka hanaqaada.
Rabbi ka u raxaristee C/llaahi Yuusuf, waxaa uu ifka uga tagay afar carruur ah oo uu dhalay, ahna labo wiil iyo labo gabdhood, kuwaasi oo iyagana carruur kale sii dhalay.